Abaabul Balooggaaga! • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
DutchtownSTL, Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown, Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown, Iyo Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown waxay isu kaashanayaan inay abaabulaan dhismeyaal adag iyo xaafad Dutchtown ah oo xoog leh!
Deriska is yaqaan oo is fiiriya ayaa laf dhabar u ah bulsho xoog leh. Baloog abaabulan, si kasta oo si rasmi ah ama si aan rasmi ahaynba loo abaabulay, wuxuu kordhiyaa nabadgelyada, wuxuu hagaajiyaa bilicsanaanta, wuxuu soo jiitaa deriska cusub, waxna waa loo qabtaa.
Sideen u abaabulnaa Baloogkeena?
Waxaan dooneynaa inaan ku xirno baloogyada ilaha si ay u helaan oo u sii ahaadaan kuwo abaabulan. Halkan waxaa ku yaal kala-sooc ku saabsan hannaankayaga saddexda tallaabo ah si aad u hesho xannibaaddaadu.
Deriska deriska 4400 ee Virginia ayaa ka wada hadlaya abaabulka.
Gaarsii! Weydii deriskaaga haddii ay xiiseynayaan abaabulka dhismaha si ay u keenaan isku xirnaan iyo ilo badan dhismahaaga. Haddii deriskaas mashquul yahay, weydii deriska xiga, iyo deriska xiga, ilaa aad ka hesho koox muhiim ah oo diyaar u ah inay bilaabaan inay si joogto ah ula xiriiraan.
Aynu gacan ka geysano fududeynta isdhexgalka hore ee bilaabi doona adiga. Haddii balooggaagu isku duba ridi doono arrin socota, ama aad doonayso inaad si fiican isu barataan, waxaan kaa caawin karnaa isu keenidda dadka.
Waxaan ku siin karnaa talooyin iyo qalab aad kula xiriiri karto deriskaaga. Waxaan sidoo kale la imaan doonnaa deriska khibrad u leh abaabulida guryahooda si ay ugala hadlaan nidaamka iyo xulashooyinka u banaan gurigaaga.
Wadahadalku wuu ka duwanaan doonaa guri kasta. Qaar ka mid ah baloogyada ku yaal Dutchtown waxay adeegsadaan barnaamijyada fariimaha sida GroupMe, kuwa kalena waxay u diraan qoraal, qaar waxay leeyihiin liisas emayl ah, qaarna kooxaha Facebook.
Websaydh Bilaash ah oo loogu talagalay Balooggaaga
Ka hel degel halkan DutchtownSTL.org si ay kaaga caawiso inaad la wadaagto wararka, dhacdooyinka, iyo ilaha deriska deriskaaga! Ka eeg tusaale 4200 Louisiana or nala soo xiriir si aad u hesho!
Intaa waxaa sii dheer, DutchtownSTL waxay kuu abuuri kartaa degel websaydh adiga iyo deriskaaga si ay u dhexgalaan ilaha, u wadaagaan wararka, u dajiyaan waqtiyada kulanka, iyo inbadan. Bal eeg waxa aan u dhisnay Xerada 4200 ee Louisiana.
Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho oo aad dejiso hababka isgaarsiinta ee ugu wax ku oolka badan gurigaaga. Isgaarsiinta ayaa fure u ah sameynta iyo dayactirka xarun abaabulan. Waxaan haynaa habab kala duwan oo aan ku dabooli karno baahiyaha dhismayaal kala duwan. Xusuusnow, inaad ixtiraamto waa magaca ciyaarta, waxaanan sidoo kale ka helnay tilmaamo.
Waxaa jira ilo badan oo laga heli karo gudaha Dutchtown. Haddi ay qof walba siinayso madax ku saabsan dhacdada Waddooyinka Weyn ee Dutchtown Beerta Marquette, aadista Xarunta CID ee Dutchtown si wax looga qabto hagaajinta raasamaalka, ama ku biiraya shirkadda Dutchtown South Community Corporation Guddiga Awoodsiinta Bulshada si aad uhesho ilaha gurigaaga, waxaa jira koox ku taal Dutchtown oo ka shaqeynaya hadafka guud ee dhismahaaga.
Raadi ururada iyo ilaha dhaqaalaha taasi waxay kaa caawin kartaa inaad dhisto dhismo wanaagsan!
Ururada Dutchtown waxay kugu xiri karaan dadka, waaxaha magaalada, SLACO, Brightside St. Louis, ka Ururka Magacyada Ururada Degmooyinka, Kaalmaynta Mutadawalka ee STL, iyo ururo kale inay isu keenaan deriskaaga oo ay ka hadlaan arrimaha ku saabsan dhismahaaga. DutchtownSTL sidoo kale waxay bixisaa maktabad sii ballaaraneysa oo ah ilaha internetka. Barashada sida loo socdo howlaha magaalada si wax loo qabto way adkaan kartaa, laakiin waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino.
Fiiri sida aan kuugu xiri karno.
Maxaan Sameynaa Marka xiga?
Waxaan diyaar u nahay inaan kaa caawinno inaad bilowdo maanta! Mar alla markii aad eegto geeddi-socodkeenna kor lagu soo sheegay, qaado liistada halka aad hadda taagan tahay, oo aan kaa caawino buuxinta meelaha banaan.
Su'aalaha qaarkood ee aad isweydiiso waxaa ka mid ah:
Miyaynu leenahay deris kale oo danaynaya ama durba ku lug leh?
Ma naqaanaa sida loola xiriiro deriskeenna?
Sidee buulkeena u la xiriirtaa? Waxtar ma leedahay?
Gurigeenna ma leeyahay arrin gaar ah ama arrimo ay diiradda saaraan?
Maxaan qabanay si aan wax uga qabano arrimaha naga horyaalla?
Markaad qiimeyso baahiyahaaga, nala soo xiriir oo nala soo socodsii sida aan u caawin karno! Kaliya buuxi foomka hoosta bogga.
Ma hubo in Balooggaygu diyaar yahay
Waa caadi! Waxaa laga yaabaa inaad jeclaan laheyd inaad waqti badan ku qaadato inaad barato ururada iyo dadka ka shaqeeya Dutchtown ka wanaagsan. Waad tixgelin kartaa iskaa wax u qabso, ku biirida mid ka mid ah Guddiyada Dutchtown, u imanaya a kulanka xaafada, ama aad u daadagto wax uun dhacdo xaafadeed.
Haddii aadan hubin haddii abaabulka balooggu uu adiga kugu habboon yahay, xor ayaad u tahay nala soo xiriir oo waxaan ka wada hadli karnaa sida aad ula jaan qaadi karto magaalo xoog leh oo Dutchtown ah!
Wax yar oo macluumaad ah halkan hoose noo sii, waxaanan kaa caawin doonaa sidii aad ku bilaabi lahayd ASAP!
Miyaad horeba ula shaqeynaysay deriska kale? Haa Maya
Miyaad hore u haysatay waddo aad kula xiriiri karto deriskaaga? Haa Maya tusaale ahaan lambarrada taleefannada, cinwaanada emaylka, ama xiriirka shaqsi ahaaneed ee joogtada ah
Maxaad u dooneysaa inaad abaabusho dhismahaaga?
Kaliya inaad saaxiibtinimo la yeelatid Arimaha amniga (dambiga, taraafikada, iwm.) Arimaha qurxinta (nadiifinta, jardiinada, iwm.) Arrimo kale (daadinta, dhismayaasha banaan, iwm.) Calaamadee dhammaan inta quseysa.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay November 13th, 2021 .
DutchtownSTL.org Abaabul Balooggaaga!